Amin’ny fanoherana ny zon’ny pelaka, miara-dalana mba hisara-kevitra kokoa ny solontenan’ny mpitondra fivavahana avy ao Trinite sy Tobago · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jolay 2018 18:47 GMT
Roa volana lasa izay, nanambara ny mpitsara iray ao amin'ny Fitsarana Ambony ao Trinite sy Tobago fa “tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana” ny ampahany amin'ny Lalàna mifehy ny fandikan-dalàna ara-nofo manasazy ny firaisan'ny samy olon-dehibe any amin'ny lava-pitombenana; androany, misy vondrona mpitondra fivavahana milaza fa hanohitra mafy ny fampidirana ny fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana sy ny fanitsiana ny lalàna mifandraika amin'ny fitoviana izay miaro ny vitsy an'isa ara-pananahana.
Tsy dia niray hevitra foana ireo tompon'andraikitra ara-pivavahana: Nandidy an'i Joseph Harris, nitondra talohan'i Gordon, i Maharaj izay fantatra amin'ny toetra mampiady hevitra, tamin'ny Mey 2016, hoe “ny raharahanareo iasana saina” [mg] eo amin'ny sehatry ny fampanambadiana ankizy. Ho azy, resaka manokan'ny fiarahamonina Haindò sy ny fanjakana izany. Nanomboka teo, nambara ho tsy ara-dalàna ny fanambadian'ny zaza tao Trinite sy Tobago.
Nandritra ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety izay “notohanana” fikambanana iray tsy miankina antsoina hoe Rebuild TT, niantso ireo mpanao politika ireo solontenan'ny mpitondra fivavahana mba hanova ny lalànan'ny fanambadiana, maro an'isa manokana mba isorohana ny fanekena ho ara-dalàna ny fanambadian'ny mitovy fananahana. Manohitra ny fanitsiana izay mety ho atao amin'ny lalànan'ny fitoviana herijika ihany koa izy ireo.
Toa nanambara ny Arseveka Katolika fa “tsy tokony hametraka ny fitakiany ny vitsy an'isa madinika be tabataba”. Nolazainy ihany koa fa mampiseho ny fomba fijerin’ ny 90 isan-jaton'ny mponina ao Trinite sy Tobago ny fomba fijerin'ny vondrona, saingy tsy nisy loharanom-baovao notononiny anehoana io isa io.
Raha inoana ny isan'ireo tsikera natao tao amin'ny tranonkala, dia tokony ho anisan'ny “10% sisa” ireo mpampiasa ny tambajotra sosialy — mihevitra ny ankamaroan‘izy ireo fa diso laharam-pahamehana ireo fikambanana ara-pivavahana ary tohina amin'ny fihatsarambelatsihin'ny hevitra ijoroany, raha jerena ny tantaram-piainan'izy ireo manokana sy ny lasan'ny fikambanana isoloan'izy ireo tena.
Tezitra mafy ihany koa i Patricia Worrell, mpampiasa Facebook iray:
Tillah Willah namoaka ny sarin'ny solontenan'ireo mpitondra fivavahana, niampy izao fanehoan-kevitra izao :
Sary-sy-soratra iray hafa nampandray volontany avy amin'ny horonantsarin'ilay mpihira amerikana Chidich Gambino hoe “This is America” mampiseho ny arseveka manondro fiadiana eo amin'ny saina miloko avana.
Farany, nanoratra tao amin'ny iray amin'ireo fanehoan-kevitra izay nampieritreritra indrindra tamin'ny lohahevitra ilay poeta Shivanee Ramlochan hoe:
Nilaza ny governemantan'i Trinité-sy-Tobago fa mbola hampiakatra ny fitsarana mikasika ny sodomia. Misy fotoam-pitsarana iray fanampiny amin'ny 4 Jolay 2018 ary mbola manantena zavatra tsara i Jones; manantena izy fa hanohana indray ny fampidirana ny vondron'olona marefo ao anatin'ny lalànan'ny fitoviana herijika ilay vaomieran'ny fitoviana herijika (Equal Opportunity Commission, EOC) izay nanohana ity raharaha ity.